Fanambadiana – 2trondro
Home / Fiangonana / Ny sakramentan'ny / Fanambadiana
Nahoana no ny Eglizy Katolika toy izany ny tery famaritana ny fanambadiana?
Ny Fiangonana famaritana ny fanambadiana dia nambara avy amin'Andriamanitra; toy izany, dia tonga lafatra, ary tsy azo ovana ny hifanaraka ny firehetam-po ny olona.
Ny mpiambina ny Fiangonana ny fanambadiana, na ny fanambadiana masina tamim-pahazotoana tokoa, satria tena mino azy io ho zavatra masina: dia nomen'Andriamanitra-voatendrin'Andriamanitra firaisana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Soratra Masina dia maneho ny maha-fanambadiana roa sosona: ny unitive toetra (i.e., ny firaisana ny mpivady) ary ny fananahana toetra (i.e., fanehoany ny taranaka). Ohatra, in Genesisy hitantsika fa Andriamanitra no nanao ny olona ho lahy sy vavy; ary Izy niantso ireto mifameno roa vavy ho tafaray iray hafa ao amin'ny didy lehibe mba miteraka. "Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy Andriamanitra; lahy sy vavy no namoronany azy ireo. Ary Andriamanitra nitso-drano azy ireo, Ary hoy Andriamanitra taminy, 'Maroa fara sy mihabetsaha' " (Genesisy 1:27-28). " 'Izao farany dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko,' "Nihiaka hoe Adama tamin'ny voalohany nahita Eva. "Koa,"Soratra Masina avy eo hoe:, "Ny olona nandao ny rainy sy ny reniny ary ny miraikitra amin'ny vadiny, ary ho nofo iray ihany izy ireo " (Genesisy 2:23-24).
Satria Andriamanitra ny fanambadiana natao mba ho mariky ny fanekena ho Azy sy ny olony, ny monogamous, indissoluble firaisana no tsara indrindra. Jesosy laoniny ny fanambadiana tena tsara izany nandritra ny asa fanompoany. Rehefa nanontany ny Fariseo hahitana raha nisy fisaraham-panambadiana na tsy azo atao na inona na inona toe-javatra, ny Mpamonjy hoy: "Moa tsy novakinareo ve fa izay nahary azy tamin'ny voalohany dia nahary azy ho lahy sy vavy, ka nanao hoe:, 'Ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, ary ny roa dia ho nofo iray ihany '? Ka dia tsy roa intsony fa nofo iray ihany. Koa izay nakamban'Andriamanitra, aoka tsy hampisarahin'olona " (jereo ny Matio 19:4-6 ary Genesis 1:27; 2:24).
Dia ny Fariseo namaly, "Nahoana ary Mosesy no nandidy hanome iray taratasy fisaraham-panambadiana, ary hametraka azy?"Ny Tompo namaly: "Fa ny hamafin'ny-po Navelan'i Mosesy anareo ny hisaraka ny vadinareo, fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy izany. Ary lazaiko aminareo: Na zovy na zovy no misaotra ny vadiny, afa-tsy noho ny fijangajangana ihany, ka manambady olon-kafa, dia mijangajanga; ary ary izay mampakatra vehivavy iray nisara-panambadiana, dia mijangajanga " (Matthew 19:7-9; nampiana fanamafisana).
Ny "fisaraham-panambadiana" izay ny TOMPO tamin'i tokony tsy tokony hampifangaroina amin'ny fiaraha-monina maoderina ny hevitra ny fisaraham-panambadiana. I Jesosy no niresaka momba ny fisarahana ara-dalàna tsy misy ny fahalalahana mba hanambady indray, ny fisarahan'ny mpivady, fa tsy ny fandravana ny fanambadiana. Ny sasany, koa, no nilaza fa tamin'ny fanaovana ny afa-tsy ho an'ny fotoana ny "fijangajangana ihany" i Jesosy no mamela ny fisaraham-panambadiana. Ny teny hebreo tany am-boalohany eto, anefa, dia i, izay angamba marina kokoa adika hoe "fijangajangana,"Midika ny ota izay nitranga mialoha ny fanambadiana, dia toy izany no mamaly ny fanambadiana nahafoana. Ny Tompo, avy eo, no tsy ahitany ny handrava ny iray manan-kery ny fanambadiana, fa dia manaiky fa ny sendika dia azo adika hoe tsy manan-kery amin'ny alalan'ny misy kilema izay nampidirina tao an azy hatramin'ny voalohany. Noho izany, izany no mifanaraka bebe kokoa ny foto-kevitra ny annulments, noho ny amin'ny fisaraham-panambadiana.
Ao amin'ny andalan-teny iray ihany, koa, Jesosy mazava mandrara ny fanambadiana indray, nanao hoe:, "Izay manambady ny efa nisaorana dia mijangajanga" (Matthew 19:9; cf. 5:32). Ary hoy koa, "Koa izay nakamban'Andriamanitra, aoka tsy hisy olona hampisarahin'olona;"Ary, momba ny fisaraham-panambadiana, "Hatramin'ny voalohany dia tsy mba toy izany" (19:6, 8). Ao amin'ny Filazantsaran'i Marka, Hoy i Jesosy, "Izay misaraka amin'ny vadiny ka manambady olon-kafa, mijangajanga aminy; ary raha izy no misaotra ny lahy ka manambady olon-kafa, dia mijangajanga izy " (10:11-12; jereo koa ny Lioka 16:18).
Toy izany koa, ao amin'ny taratasiny voalohany ho an'ny Korintianina (7:10 -11), Saint Paul manoratra, "Ho amin'ny manam-bady dia manome ny anjara-raharaha, tsy izaho fa ny Tompo, fa ny vehivavy tsy tokony hisaraka amin'ny vadiny (Fa raha izy no, dia aoka tsy hanambady, na aoka hody amin'ny vadiny)-ary ny lahy aoka tsy hiala amin'ny vavy. "Araka ny Paul, ao amin 'ny taratasiny ho an'ny Korintianina, ny mpivady ihany fifamatorana ho torotoro ny fahafatesana (7:39).
Ny Fiangonana hita foana ao amin'ny fanambadiana lalina sy ny fanehoana an'ohatra miavaka ny hatsaran-toetra.
An-danitra i Jesosy nampitaha ny "fampakaram-bady" (Matthew 22:2 ary 25:10), ary ny voalohany fahagagana-bahoaka–ny mamadika ny rano ho divay–dia nanao tao amin'ny fanasana fampakaram-bady (jereo ny Jaona 2:1).
Paoly nahita ny fanambadiana ho toy ny modely Jesosy hanambady ny ny Fiangonany (hahita ny taratasiny ho an'ny Efesianina 5:32).
Ny Kristianina voalohany asa soratra ara-tantara mihoatra ny Soratra Masina koa hiaro ny fahamasinana sy ny indissolubility ny fanambadiana. Ohatra, Saint Ignace d'Antioche, nanoratra in momba ny A.D. 107, nanao hoe:, "Tsy mety ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy izay maniry ny hanambady mba ho tafaray amin'ny fankatoavan'ny ny eveka, ka fa ny fanambadiana dia ho ankasitrahan'ny Tompo, ary tsy niditra teo noho ny filàna. Aoka ny zavatra rehetra hatao ho ny voninahitra avy amin'Andriamanitra " (Taratasy ho Polycarpe 5:2).
Tamin'ny momba ny taona 150, Saint Justin Maritiora fanehoan-kevitra ao amin'ny Matio 19:9, nanoratra, "Araka ny Mpampianatra, tahaka ireo mpanota izay fifanekena faharoa fanambadiana, na dia tsy araka ny lalàna olombelona, dia tahaka izany koa no ireo mpanota izay mijery amin'ny faniriana nanana filan-dratsy amin'ny vehivavy " (voalohany fialan-tsiny 15). Tokony izany fotoana izany, Athenagoras ny Athens nanoratra, "Mino koa isika fa misy olona na hijanona araka izay teraka raha tsy hanambady indray mandeha ihany. Fa ny faharoa dia miafina fanambadiana fanitsakitsaham-bady " (Ny fangatahana ho an'ny Kristianina 33). "Ahoana no ampy,"Hoy ny nosoratan'i Tertullien teo am-piandohan'ny taonjato fahatelo, "Fa ny filàzany izany fahasambarana izany fanambadiana izay ny Fiangonana Nataon'Andriamanitra, izay ny sorona (i.e., ny Eokaristia) Mampatanjaka, izay ny fitahiana mamaritra ny tombo-kase, izay ny anjely manambara, ary izay manana ny Ray ny fankatoavan'ny?" (Ny vadiko 2:8:6). Mandritra izany fotoana izany, Saint Clément avy any Aleksandria, nanonona ny fampianaran'i Kristy ao amin'ny Matio 5:32, voafaritra ny fanitsakitsaham-bady toy ny niditra tao amin'ny fanambadiana faharoa raha ny teo aloha dia mbola velona vady (Stromateis 2:23:145:3)